ए गोलखाडा ! तिमीलाई हराउने कोसिस गरिदैछ « Postpati – News For All
ए गोलखाडा ! तिमीलाई हराउने कोसिस गरिदैछ
धनवहादुर बुढा मगर । फाल्गुन १०, २०७५ । पृथ्वीको उत्पति भएको साढे चार अर्व बर्ष भएको बैज्ञानिकहरु बताउछन् । यहि पृथ्वीको एउटा कुनामा नेपाल पनि छ र त्यहाँ पुर्खाहरुले घर बनाएर खेतिपाती गर्दै क्रमशः आजको दिनसम्म आइ पुगेका छौँ । तर पनि भन्छन् गोलखाडाको आयु छैन ।
सौर्यमन्डलमा रहेका हरेक पिन्डहरु एकदिन विध्वंस हुने छन् । सबैको आयु सकिने छ । हरेक बस्तुको आकार नै रहने छैन । अन्ततः पृथ्वीको पनि निश्चित आयुसम्म मात्र बाच्ने छ । यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
यहाँ भनिएको छ, “गोलखाडा को भबिस्य छैन भु-क्षयको जोखिम छ, जन घनत्व छैन । भौगोलिक हिसाबले साघुरो र भिरालो छ, त्यसकारण सदरमुकाम बस्न सक्दैन ।” म प्रश्न सोध्न चाहन्छु: यदि त्यसो हो भने पृथ्वीको उत्पत्तिसङ्गै ती बस्तीहरु आजसम्म किन जिवित छन् ? आजसम्म नसोचेको प्रलय किन भएन ?
यहाँ अर्को तर्क पनि लगाउने गरेका छन् कि बाग्लुङ, डोल्पा र जाजरकोट जिल्ला सदरमुकाम एउटा किनारामा छन् । रुकुम पुर्बको सदरमुकाम रुकुमकोटमा किन हुन सक्दैन ? मेरो प्रतिक्रिया यस्तो छ- तत्कालीन अबस्थामा जिल्लामा कार्यरत हाकिम कुन कुन” जिल्लाका बासिन्दा छन् ? उनिहरुले आफुलाई पायक हुने स्थानमा सदरमुकाम राखेका हुन् । न त भु-क्षयको अध्यन गरे, न त जनघनत्वलाई बिचार गरे, न त समग्र जिल्लाको क्षेत्रफलको केन्द्र बिन्दु तर्फ ध्यान दिए । यो त गोलखाडालाई अस्विकार गर्न रचिएको एउटा प्रोपोगन्डा मात्र हो ।
पुथा उत्तरगङ्गा ! तिम्रै न्यानो काखमा, तिम्रै आँचल भित्र लुकिछिपी गर्दै हुर्केका बहादुरहरु, सिस्नु र ढिडो खाएर प्राण भरेका वीरहरुलाई आजभोलि आँचल घिन लाग्दैछ रे ! सिस्नु र ढिडो मिठो हुदैन रे ! पुथा ! तिम्रो अंग चिथोरिदै छ, ती घाउवाट रगत बग्दैछ तर पनि मल्हमपट्टि लगाउने आटीला मान्छे छैनन् । आफ्नै सन्तानले कुठाराघात गर्दै छन् । सहोदर भाइ “भुमे गाउपालिका” मौन समर्थन सिस्नेलाई गर्दैछ । ठुलो भनिनेहरुले रुकुमकोटमा घर घडेरी जोडी सकेका होलान् । त्यसलाई बचाउन पनि रुकुमकोटकै पक्षमा उभिने छन् । त्यसैले, ए ! गोलखाडा तिमी हार्दै छौ । तिमिलाई हराउने तानाबाना बुनिदैछ । तिमी माथी परेको अन्यायको निम्ति धावा बोल्ने सपूत कहिले जन्माउछौ ?